Ballmer: "Linux haisisiri kenza, ndeyechokwadi inokwikwidza neWindows" | Linux Vakapindwa muropa
Ballmer: "Linux haisisiri kenza, ndeyechokwadi inokwikwidza neWindows"
Joaquin Garcia | | Noticias, Windows
Aimbova Microsoft CEO Steve Ballmer yakagadzirisa maonero ake paGNU / Linux, iyo sekuziva kwako, yaive yakaenzana nekenza yezvivakwa zvedzidzo. Ballmer akadzokorora ndokuti GNU / Linux haisisiri kenza asi muvengi chaiye weWindows.
Ballmer anonyevera kuti panguva mumakore achangopfuura Linux yakakura uye yakavandudzika zvakanyanya, chimwe chinhu chakachiita mukwikwidzi mukuru weWindows uye chikuva chayo. Linux ikozvino iri kumashure kweWindows uye kana Microsoft ikasaita chero chinhu nezvazvo, Linux ichawana Windows. Izvi ndizvo zvinofungwa naBallmer uye nekudaro, mushure mekuzivisa kuti Microsoft yakaita nezve SQL Server kutakurika kuLinux, Ballmer akanyora email kuna Satya Nadella, iyezvino CEO weMicrosoft, kuzokorokotedza iwe pachisarudzo chakarurama.
Steve Ballmer anotenda izvozvo Microsoft inofanira kupa rumwe rutsigiro kuGnu / Linux kutora mukana nemamiriro ezvinhu uye kudhonza kuri kune penguin chikuva. Chinhu chinoita senge chinoratidza kuti Ballmer anotya Linux uye anosarudza kujoina pane kupinda pasi.
Ballmer anoti Linux hombe, yakaoma mukwikwidzi kuWindows
Ballmer akarega kwenguva refu kuve CEO weMicrosoft, asi hatifanire kukanganwa izvozvo inoramba iri mumwe wevazhinji vagovana vekambani uye nekudaro anotsvaga zvakanaka zvekambani kuti awane zvakanaka muhomwe yake. Kunyangwe zvakadaro, ichiri hunhu kuti mumwe wevanyori akashoropodza Linux zvakanyanya ari kuitsigira kana kumborumbidza.
Ini pachangu handigovane maonero akafanana neBallmer. Ini handifunge kuti Gnu / Linux yakavandudza zvakanyanya mumakore ano, asi simba uye mashandiro azvino aive nawo makore gumi apfuura kana kunyange zvisati zvaitika, zvisinei hazvo uye vanhu vazhinji vaona runako rweiyo penguin inoshanda sisitimu uye izvi zvaita kuti vanhu vazhinji vaishandise kwete Windows. Pane rimwe divi, Microsoft mumakore aya, kunyanya apo Ballmer aive CEO, yakabata vashandisi vayo zvakaipisisa uye izvo zvakavaitawo kuti vasarudze GNU / Linux, inoshanda system isingatsvage kuita mari asi kutsvaga mhinduro. Chokwadi munguva pfupi inotevera tichazoziva chimwe chigadzirwa cheMicrosoft chinosvika kuGnu / Linux Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ballmer: "Linux haisisiri kenza, ndeyechokwadi inokwikwidza neWindows"
Handizive zvinofungwa naBalmer, ndokumbirawo umugadzirise, maziso angu anorwadza.
Filipo Becerra akadaro
Ha! ndiko kunonzi kugeza mifananidzo.
Pindura kuna Filipo Becerra
Kunyanya Ballmer akataura kuti ... hehehe ... Ndinoiwana ichida kuziva.
Chinhu chakakosha ndechekuti Penguin yedu yakavezwa kare kare uye hapana chinhu chega uye zvakanyatsonaka kuburikidza nemakungwa emakomputa.
Mazuva ese akatendeka kune angu madhiri. Kwaziwai!
akange asina imwe sarudzo kunze kwekubvuma
Mukomana iyeye ibenzi ... agh ... anga achisvira nemahwindo hupenyu hwake hwese uye iye zvino ave shamwari
Eudes Javier Contreras Rios akadaro
Micrososft iri kugadzirira kuburitsa yayo Windows GNU / Linux? Handizive kuti zvingave zvakanaka sei, rangarira mono nguva yekumhanya; inogona kudzokororwa asi pachiyero chakashata chemahara software.
Pindura Eudes Javier Contreras Rios
Fernando Corral Fritz akadaro
Iniwo ndinofunga zvakafanana neEudes, ndinofunga kuti Microsoft iri kuronga kuburitsa yayo yega GNU / Linux distro asi kazhinji kutsiva Windows Server.
Pindura Fernando Corral Fritz
Zvakanaka, ndinosiyana newe uye ndezvekuti maererano nesangano kana padanho remafekitori esoftware, kana yakagadziriswa uye mumakore gumi apfuura ayo akange asipo, kwaive uye kuchiripo kusagadzikana kana kana kusiri nekuti kune hapana zviyero muzvinhu zvisingaunze kusawirirana pakati pekunaka gnu / linux, uye izvo chaizvo, chimwe chinhu isu tichiri kushomeka nesoftware inokwikwidza neavo windows chikuva uye ini ndinongotaura nezve yakakurumbira software, tisingatauri nyanzvi, bata wini kana playon, uye handireve kuti hapana software yehunyanzvi mu gnu / linux, zvinongova kuti isu tichiri mapfupi uye tinofanira kuenda ikoko.
Ini ndinotaura izvi semushandisi wezuva nezuva, mudzidzi weU, sehunyanzvi mune rutsigiro rwemidziyo uye seanouya muzvinabhizimusi.
Linux ipuratifomu yakanaka kwazvo uye ndinofara kuti iri kuramba ichivandudza, kwandiri chinhu chinogutsa ndechekuti vanogadzira vanoteerera vashandisi ini ndinofunga ndiyo yakasimba mukusimudzira nekuti ivo vanoziva kupa mushandisi izvo zvavanoda uye vanozvida sei.
Julius Saldivar akadaro
Miguel maererano nehunyanzvi software, zvinoenderana nebasa, ini nehunyanzvi ndinozvipira kumusoro we IP telephony, uye Linux ndipo pane software yakakomba yeiyi, hazviwanzo kuona IP control panels inomhanya paWindows.
Pindura kuna Julio Saldivar
Zvakanaka, zuva rinobuda iri "Microsoft Linux" rinozove kukunda kwenyika yeLinux, uye kunyangwe pasina kuhwina neKO, pakupedzisira nguva ndiani achataura.
Ini ndinotaura izvi nekuti isu sevashandisi veGNU Linux distros takaona maitiro eimwe neimwe emapurojekiti akachinja. Kana MS Linux ikabuda, zvingave kubvuma kuti ndiko kukundwa munguva refu uye inosarudza kuburitsa mureza muchena nenguva.
Andresito Malave akadaro
Kana kwandiri Microsoft yatove kuronga kuronga kuburitsa distro yedivi re server. Ivo vanoona kuti WINE inomhanya zvakanaka ichiita reverse engineering uye kuti Crossover iri kuita mashura.Vanoda yavo yega distro saNovell yakatengwa SUSE uye nyangwe Oracle ine yavo distro, ivo vatoona zvichikwanisika kuwana yavo distro.
Pindura Andresito Malave
Panotova ne windows distro (kwete gnu) ... vanababa, pachave nemeso, zita rayo windows 10 uye chinongedzo chayo "Powe Shell" ... ndakaongorora, vakaisa maoko kwete marezinesi asi nezvematongerwo enyika uye nzira yekushanda (insider muenzaniso wakanaka). Uyezve ndezvipi, chinzvimbo zvirokwazvo hachina matanho ezvakawanikwa kwenguva-refu.
Rima Dungeon: rakakura mutambo wakatumirwa Linux